muruh's blog - Skyrock.com
Oday dhaqameed cusub oo lagu caleemo saaray Magaalada Maaneed 28 11 2013 06/12/2013
odey dhaqameed cusub oo lagu doortey magaalada maaneed ee dowlad deegaanka soomaalida ....
Qisadii Nin Dhalmadii ka raagtey Sanado Badan oo Dhalay. 09/11/2013
Qisadii Nin Dhalmadii ka raagtey Sanado Badan oo Dhalay.
Qisadii Cilmi Bodari iyo Hodan by Hereri 03/11/2013
Taariikhdii cilmi boodhari oo kooban oo ku faaloonayo c/salaan hereri bal wax yar ila daalacda ...
ila daawada heestii lagu taageerayey ururka la dagaalanka qaadka ee uu gudoomiyaha u yahey abuukar cawaale ...
LONDON La dagaalanka Qaadka oo la gudoonsiiyey Abaal Marin 30 04 2013 26/09/2013
Gudoomiya ururka la dagaalanka qaadka, Mr Abuukar Awale oo bilad sharaf la gudoonsiiyey ...
Barnaamijka La,dagaalanka Qaadka 26/09/2013
Barnaamijka la dagaalanka qaadke, ee uu hirgalinayo ABUUKAR CAWAALE, ma ku saxan yahey mise waa uu ku khaldan yahey bal ila daawada vediogaan bal inaan ku faraxdo iyo bal inaan diido wixii adiga kula soo gudboonaadaba thanks asxaabta pageka ku xiran ...
haatana waa abuukar cawaale oo booqasho ku jooga tvga qaranka soomaaliyeeed bal ila daawada ...
BARNAAMIJKA WACYI IYO WARAYSI ABUUKAR CAWAALE LA DAGAALANKA QAADKA 05 09 2013 26/09/2013
LA DAGALANKA QAADKA SOO SAARE ABUKAR CAWALE 15 09 2013 26/09/2013
Isbitaalkaweyn ee Gobolka Mudug oo howlo caafimaad ka fuliyey Daarasalaam iyo Riig oomane (Daawo Sawiro+Quruxda deegaanka) 21/09/2013
waa qeybtii ugu danbeeysey ee sawirada daarusalaam iyo riig oomane ....
iyo xog ku saabsan sawiradaad oo aanu soo raacinayo hadii allaha awooda leh ogolaado ...
Koox dhaqaatiir ah oo uu hogaaminayo Agaasimaha guud ee Isbitaalka weyn ee Gobolka Mdug Dr.Maxamed Xuseen Aadam ayaa waxaa ay gaareen deegaano ka durugsan Laamiga ee aan inta badan lagarin, marka laga shaqaynayo arimaha bulshada.
Kooxdaan dhaqaatiirta ah ayaa waxaa ay ubexeen si ay usoo baaran daawana usoosiiyaan dadka iyo xoolaha deegaankaas, waxaana ay dhaqaatiirtu isugu jirtay koox kasocota xanaanadda Xoolaha gobolka Mudug iyo koox kasocota Isbitaalka weyn ee gobolka Mudug ee Magaaladda Gaalkacyo.
Safarka dhaqaatiir ayaa waxaa ku weheliyey gudoomiyaha Gobolka Mudug Maxamed Yusuf Jamaca Tigay, oo isna Qayb ka ahaa howl galkaan, lagu daaweynayo dadaka iyo duunyada Gobolka Mudug.
Gudoomiyaha Gobolka Mudug Maxamed Yusuf Jamaca ayaa mar uu kahadlayey goobaha ay kasocotay daaweynata xoolaha iyo baaritaanka dadka ayaa waxaa uu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin ay halkaan soogaaraan ayaga oo bulshadooda u adeegaya, ayana adeegaan soo gaarsiiyaan goobahaan.
Gudoomiyaha ayaa waxaa uu intaas ku daray in ay tani Qab ka tahay Hal ku dhaga ay ugu tala galeen hor marinta Gobolka Mudug, kaas ay halku dhag uga dhigeen “Mudug Shalay iyo Maanta”
Waxaa isna Goobta ku ka hadalay Agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaaladda Gaalkacyo, Dr.Maxamed Xuseen Aadam oo sheegay in ay howshaani tahay mid horay usoosocotay, ayana sii wadi doonaan hadii alle yiraahdo.
Agaasimaha ayaa sheegay in ay sameeyeen Baaritaano badan, ayan si wadar ah ubaareen dadka iyo Xoolaha, si looogaado xanuunadda ay wadaagaan, sidoo kalana waxaa uu sheegay in ay daawo siiyeen dad aad ufara badan, oo ku dhaqan deegaaanadda Daarusalaam, Riig ooamane iyo Deegaanadda hoosyimaada.
Maahan markii uguu horaysay oo ay koox dhaqaatiir ah oo ka socota Isbitaalka weyn ay booqdaan tuulooyinka ka fog laamiga iyo xarumaha caafimaadka ee waaweyn, iyada uu Agaasimuhu uu sheegaay in ay ujeedka llaga leeyahay in dadka labooqdo goobahoodana loogu tago ay tahay, in ummadda reer Mudug ay dhamaantood ogaadaan in Isbitaalka guud ay iyagu leeyihiin dhaqaatiirta joogtana ay iyaga u adeegayaan, iyo in dadka Gobolka Mudug ay si siman u helaan Daaweyn isku mid ah.